UPD – Midowga Nabadda & Horumarka – Union for Peace & Development
Ansixinta KMG ee Dastuurka iyo Dooraashada Guddoomiyaha Xisbiga
Hambalyada Maalinta Calanka Soomaaliyeed
Jaaliyaddaha Soomaaliyeed ee UK oo soo dhaweeyay Xisbiga UPD
Booqashadii Guddiga Madaxa banaan ee Doorashooyinka Qaranka ay ku yimaadeen xarunta dhexe ee UPD
Kulanka Hogaanka & Aqoonyahanka UPD
Kulanka Hogaanka UPD iyo dhallinyarada cusub ee Xisbiga kusoo biiray
MIDOWGA NABADDA IYO HORUMARKA
Isbeddel siyaasadeed oo horseeda
Nabad & Horumar
Xisbiga Midowga Nabadda iyo Horumarka wuxuu u taagan yahay ilaalinta midnimada dhuleed iyo madaxbannaanida siyaasadeed ee dalka,dhowrista xuquuqaha aasaasiga ah, xorriyadda muwaaddinka, hirgelinta sarreynta sharciga, xaqiijinta nabadda iyo horumarinta caddaaladda bulshada.
Xisbigu waxa uu diiradda saarayaa misna ka shaqeynayaa arrimahan hoose
Xisbiga UPD wuxuu aamisan yahay in Qabyo Qoraalka Dastuurka (Provisional Constitution) uu yahay sharciga ugu sarreeya ee…
Xisbiga UPD wuxuu qaadan doonaa siyaasad arrimo dibadeed oo ahamiyadda koobaad siisa maslaxadda qaranka, gaar ahaa midda…
Xisbiga UPD wuxuu rumeysan yahay in sugidda amniga iyo badbaadada bulshada ay aasaas u yihiin horumarka dalka. Sidaas darteed,…
Xisbiga UPD wuxuu rumeysan yahay in federaaleynta Soomaaliya ay tahay arrin dastuuri ah, loona baahan yahay in, sida dastuurku…
Mowqifka Xisbiga UPD waa in midnimada Soomaaliya ay muqaddas tahay, cad/qeyb ka tirsan gayiga Soomaaliyana aan laga tanaasuli…
Soomaaliya waa dalka shanaad ee ugu saboolsan dunida, sida uu sheegay Bangiga Adduunka. Saboolnimaduna waxay saldhig u tahay…
LA SOCO HAWLAHA XISBIGA
Muqdisho-30-July-2020, Guddoomiyaha Xisbiga Midowga Nabadda iyo Horuma UPD ahna Madaxweynihii sideedaad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xassan SHiekh Maxamuud ayaa si faah faahsan uga warbixiyey kulan dhawaan dhexmaray Guddoonka Golaha shacabka iyo Hogaanka Madasha Xisbiyada Qaran kaas oo qabsoomay 28 bishan.
Guddiga fulinta ee Xisbiga Midowga Nabadda iyo Horumarka UPD oo ka arrinsaday sidii loo dar dar galin lahaa howlaha Xisbiga.
Wareysi uu bixiyay guddoomiyaha Xisbiga UPD
Guddoomiyaha Xisbiga UPD oo ka hadlay muhiimadda ay xarunta 3-aad ee dhowaan la furay xisbiga u leedahay
War-Murtiyeed: Dib U Sixidda Magaca Xisbiga
Si dhaqangal ah, xubnaha xisbiga waxa ay isku raacay in magaca xisbigu uu noqdo Midowga Nabadda iyo Horumarka.
Warar Murtiyeedka kale
Madaxweyne Hassan Sheikh Mohamud ayaa reer Koofur Galbeed, shacab & mas'uuliyiinba ugu hambalyeeyay go'aankooda qaadashada kaalinta uga aadaneyd hirgelinta doorashooyinka, wuxuuna sidoo kale hambalyo u diray Senatarrada kusoo baxay doorashadii maanta ka dhacday magaalada Baydhabo.
Si gaar ah ayuu madaxweyne Hassan Sheikh Mohamud ugu hambalyeeyay haweenkii ku guuleystay xildhibaannimada Aqalka sare, isagoo ilaahay uga baryay in uu u fududeeyo mas'uuliyadda loo igmaday.
Xafiiska Warfaafinta UPD
Website: upd.so/ ... See MoreSee Less
Madaxweyne Hassan Sheikh Mohamud ayaa shacabka iyo dowladda goboleedka Puntland ugu hambalyeeyay 23-sano guurada kasoo wareegatay aasaaska maamulka Puntland.
Madaxweyne Hassan Sheikh Mohamud ayaa tilmaamay in dhismaha dowlad goboleedka Puntland uu horseed u noqday daadejinta adeegyada dowladda iyo kor u qaadista wacyiga bulshada ee dowlad wanaagga.
Madaxweyne Hassan Sheikh Mohamud ayaa ka tacsiyeeyay, murugadana la qeybsaday qoysaska, ehelada, guud ahaan shacabka iyo dowladda Jubbaland oo ay ka baxeen ciyaartoydii ku geeriyootay qaraxii galabta Kismaayo ka dhacay.
Madaxweyne Hassan Sheikh Mohamud ayaa ilaahay uga baryay ciyaartoydaasi in uu Jannooyinkiisa ugu naxariisto, isagoo dhinaca kale xusay in falalka ay argagaxisadu ku beegsaneyso dhallinyarada Soomaaliyeed aan marnaba la aqbali karin oo loo baahan yahay in si deg deg ah talaabo looga qaado.
#argagixisadudiinmalaha ... See MoreSee Less